Nagarik News - क्यासिनोलाई भर्‍याङ चढाउँदै सरकार
06 Apr 2014 | 08:32am
क्यासिनो नियमावली २०७० को दफा ३७ (१) मा 'नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने' उल्लेख छ। त्यसैगरी (२) मा 'उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिए वा दिए पनि नियमावली बमोजिम इजाजतपत्र नपाए नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि दिइएका इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिने' पनि उल्लेख छ।
क्यासिनोले बक्यौता तिर्न चार महिना थपिएको दोस्रो म्याद चैत ७ मा सकिएको थियो। त्यसपछि नियमावली संशोधन गरेर फेरि १५ दिनका लागि एक मौका दिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्य पुनः अर्को १५ दिन थप्ने तयारीमा लागेका छन्। उनले अब सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा ती क्यासिनोलाई थप १५ दिनको म्याद दिन प्रस्ताव लाने बताइसकेका छन्।
'ऐननियममा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि स्वतः खारेज भएका क्यासिनोलाई पर्यटन मन्त्री आफैं भर्या ङ चढाइरहेका छन्,' सम्बद्ध स्रोतले शनिबार नागरिकसँग भन्यो, 'कर पनि नतिर्ने र राज्यलाई चुनौती दिने क्यासिनो सञ्चालकलाई यसरी उन्मुक्ति दिइरहनुको कारण के हो? यो मन्त्रीलाई नै थाहा होला।'
पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालय पनि यो विषयमा मुकदर्शक बनिरहेको छ। अर्थले क्यासिनोहरूबाट आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्मको बक्यौता ६६ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्छ। तर, अर्थ यो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ।
त्यसमाथि आठ क्यासिनो प्रत्येकको भागमा चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख गरी ५ करोड २० लाख जोड्दा ४१ करोड ६० लाख पनि छ। यति सबै (१ अर्ब ८ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ) चुक्ता गर्न सके भनेमात्र उनीहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण हुनेछ।
पर्यटन मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षबाट नयाँ क्यासिनो दर्तादेखि पुरानाको नवीकरण र रोयल्टीसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी पाएको छ। हालसम्मको सबै बक्यौता तथा चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना चुक्ता नगर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउनका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटनले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
'तर अवैध भइसकेका क्यासिनोमा ताल्चा लगाउन गृह प्रशासनले कुनै चासो दिएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'राज्यलाई कर नतिरी क्यासिनो व्यवसाय गर्न पाइन्छ भने अन्य व्यवसाय पन अब त्यसैगरी चलाए हुन्छ।'
खिलराज रेग्मीको सरकार हुँदा 'कर्मचारीको सरकारले किन जोखिम मोल्नु' भन्दै क्यासिनोलाई एकैचोटि थप चार महिना म्याद दिइएको थियो। त्यसपछि निर्वाचित सरकार आएपछि अब पक्कै केही होला भन्ने अनुमानमा रहेका पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्री आचार्यको 'चर्तिकला' बाट तीनछक परेका छन्।
'सरकार लाचार भयो, सात–आठम महिना म्याद दिँदा त टेरपुच्छर नलाउने क्यासिनो सञ्चालकले अब १५ दिन थपेर बक्यौता तिर्छन् भन्ने एकरति विश्वास छैन,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यसैगरी १५–१५ दिन म्याद थप्दै जानु लाजमर्दो कुरा हो। अवैध सञ्चालन गरिरहने क्यासिनो सञ्चालकसँग डराउने सरकारबाट सर्वसाधारणले के आश गर्ने?'
एक दशकभन्दा बढी समय क्यासिनोमा काम गरेका मजदुर नेता कृष्ण पाण्डेले 'क्यासिनो सञ्चालकहरू सकेसम्म अझै लुटेरै खाने दाउमा' रहेको बताए। 'सञ्चालकहरूको बानी बिग्रिसक्यो,' उनले भने, 'आफू कमाउँछन, तर राज्यलाई कर, रोयल्टी तिर्दैनन् अनि मजदुरलाई तलब पनि दिन ढिलाइ गर्छन्।'
क्यासिनो सञ्चालकलाई सरकारले कर छलीअन्तर्गत तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। 'हामी सारा मजदुरको माग यही हो,' उनले भने, 'सधें सजिलो बनाइदे, म्याद थप्दे भन्दै सरकारलाई झुलाउने क्यासिनो सञ्चालकको उद्देश्य हो।'
यसअघि क्यासिनो व्यवसायीहरूको संगठन क्यासिनो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का अध्यक्ष किशोर सिल्वाले न्यूनतम तीन महिनादेखि एक वर्ष थप अवधि पाए सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने बताएका थिए।
सिल्वालले त्यसो भने पनि सरकारले यसअघि नै उनीहरूलाई धेरै पटक महिनौंको म्याद दिइसकेको थियो। चार महिना थपिएको म्याद चैत ७ मा सकिए पनि कुनै क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेनन्। तर, लगत्तै मन्त्रिपरिषदले १५ दिन म्याद थपिदिएको थियो। यसको अन्तिम दिन शुक्रबार (चैत २१) पनि सकिइसकेको छ।
पर्यटन मन्त्री आचार्यलाई यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल स्विच अफ थियो भने क्यानका अध्यक्ष सिल्लावले मोबाइल उठाएनन् र मेसेज पठाउँदा पनि जवाफ दिएनन्।